Imozulu kunye noQoqosho ngokuNgxamisekileyo kuVavanyo loKhenketho oluhlaza
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Imozulu kunye noQoqosho ngokuNgxamisekileyo kuVavanyo loKhenketho oluhlaza
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Xanduva • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism
Isimpoziyam yaseSeychelles eluhlaza
Abathathi-nxaxheba abavela kwicandelo lonke lezokhenketho kunye noluntu luhlanganisene e-Eden Bleu Hotel kwiNdibano yokuBuyiselwa kweNdawo yoKhenketho ngoLwesine umhla we-23 kweyoMsintsi, ukuqaqambisa imeko yongxamiseko lwemozulu kunye nemfuneko yezoqoqosho yokubuyisela ukhenketho oluhlaza.
Kukho iphulo lokusebenzisana elenziwa phakathi kweSebe lezoKhenketho laseSeychelles, iSebe lezoLimo, ukuTshintsha kweMozulu kunye neNdalo (MACCE), kunye neKhomishini ePhakamileyo yaseBritane.
Isimpoziyam ijongana nokwanda kobuthathaka kwezokhenketho kwiimpembelelo zotshintsho lwemozulu.
Ngokuxhomekeka okukhulu kukhenketho, le micimbi imele isoyikiso olukhulu kuqoqosho.
Eli phulo lokusebenzisana phakathi kweSebe lezoKhenketho laseSeychelles, iCandelo loMphathiswa Wezolimo, Utshintsho lweMozulu kunye neKhomishini (i-MACCE), kunye neKhomishini ePhakamileyo yase-Bhritane, bakuqonda ukwanda komngcipheko wokhenketho kwiimpembelelo zenguqu yemozulu. Isimpoziyam ikwamkele ukubanakho kwecandelo ekuthelekeleleni ixesha elide lokuhla kohambo olude kubakhenkethi behlabathi, ngenxa yenkxalabo ekhulayo yeempembelelo zekhabhoni zeenqwelo moya. Ngokuxhomekeka okukhulu kukhenketho, le micimbi ibonisa isoyikiso esibonakalayo kuqoqosho lwelizwe.
Abachaphazelekayo abavela kumacandelo abucala nakarhulumente babelane ngezixhobo esele zikhona kunye nezona ndlela zisebenzayo ngoku ukufaka isandla kulungelelwaniso lwemozulu kunye neenzame zokunciphisa kushishino lokhenketho, ukukhuthaza amashishini ezokhenketho ukuba azibandakanye kuphuhliso oluzinzileyo kwaye axhase imizamo yolondolozo. Oku kubandakanya iilebheli ezamkelekileyo zokuqinisekiswa, inkunkuma enobuchule nenenkathalo, iinkqubo zamanzi nezolawulo zamandla ezisetyenziswa kumaziko, ukuguqula izisombululo ezisekwe kwindalo kumashishini ezendalo, kunye nokunxibelelanisa ulondolozo kwikhompyuter kunye nophuhliso lwentengiso.
Kwingxelo yakhe kwisimpoziyam, uMphathiswa uRadegonde wakhankanya ukuba iziganeko zeminyaka emibini edlulileyo zisibonisile ukuba ilizwe litshintsha ngokukhawuleza kangakanani kwaye nokhenketho lusemngciphekweni kangakanani kwizinto zangaphandle, ngakumbi kwilizwe elikwisiqithi esincinci.
“Sikwangqina ukunyuka komhambi oqonda ngakumbi okusingqongileyo, othe walindela ngakumbi kwiindawo zokhenketho ukuba zibonelele ngokhetho oluzinzileyo lokhenketho. Umzekelo, uphando lubonisa ukuba inani elikhulayo labantu liceba ukubhabha kancinci ngeeholide zabo ukuze banciphise ukukhutshwa kweenqwelomoya ze-CO2 kunye nekhabhoni. Ukongeza, amatshantliziyo emozulu, aqale iphulo elinobundlongondlongo kwilizwe lonke, ngakumbi eYurophu, betyhafisa iinqwelo moya ezinde. Ezi ntshukumo zibonakala ngathi zifumana ukubambeka. Kwaye azibonisi okuhle kumashishini ethu okhenketho. Sizifumana siphakathi kweendlela apho kufuneka sikhethe ngobulumko ikamva elizinzileyo, ngakumbi isisombululo esisekwe kwindalo esingumsebenzi ophambili wokufikelela kwiCOP 26, utshilo uMphathiswa uRadegonde.
Isimpoziyam ikwasebenza njengethuba lokukhanyisa Seytshels'Igalelo eliHlaziyiweyo kuZwelonke (NDCs) - kugxilwe kwizibophelelo zesizwe kukhenketho - ukwazisa abathathi-nxaxheba kwezokhenketho ngokubaluleka kwecandelo ekufezekiseni ezi njongo kule minyaka mihlanu ukuya kwelishumi.
Ingxoxo yephaneli ngesihloko esithi "Ukubuyiswa okuluhlaza kwezoKhenketho; Iinjongo, Amathuba kunye neemfuno ”nazo zenzeke emva kwemini. Iiphaneli ziye zaxoxa ngemisebenzi kunye namathuba oshishino anokuthi aziswe luluntu ekuhlaleni; imfuno yokubuyisela kwimeko yesiqhelo ebandakanyayo ekuqwalaseleni iimfuno kunye nemingeni kubo bonke abachaphazelekayo kwezokhenketho; ukuba uhlaziyeko oluhlaza kubanegalelo njani kuQoqosho oluBlue lwaseSeychelles, kwaye nokhenketho olusekwe kwindalo lungayifumana njani inkxaso-mali yeenkqubo zolondolozo lwexesha elide ngamaxesha obunzima kushishino lokhenketho, njengoko kubonisiwe kukuqhambuka okuqhubekayo kwesibetho se-COVID-19 kwihlabathi jikelele.
Abathathi-nxaxheba bakwabonakalise kwiimfuno ezifunekayo ukufezekisa ukubuyiswa koKhenketho ngoGreen - kunye nokulungelelaniswa kwemozulu kunye neethagethi zokunciphisa - njengenxalenye yokuveliswa koxwebhu lweziphumo. Olu xwebhu lufutshane luya kubonisa injongo yesimpoziyam, kwaye isishwankathele ngokufutshane iingxoxo kunye nokuboniswa okwenziwe ngexesha lomsitho. Olu xwebhu lukwabonisa isibambiso esifutshane esisekwe kwi-NDC kunye nesithembiso sokugxila kwezokhenketho- esiza kusetyenziswa njengendawo ekubhekiswa kuyo kwiingxoxo zexesha elizayo - apho abathathi-nxaxheba baya kumenywa ukuba basayine.
Ngokubalulekileyo, bekukho ukuvumelana okungathethekiyo phakathi kwabathathi-nxaxheba ukuba iSeychelles ibekwe kakuhle ukuze ikwazi ukuziqhelanisa notshintsho ekuziphatheni kwabathengi kukhenketho lwamanye amazwe kwaye ibe yinkokeli yehlabathi kukhenketho oluzinzileyo- ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwayo nayiphi na enye indawo ekuyiwa kuyo. Ukhenketho loBuyiso oluNgcolileyo eSeychelles, njengoko kucetywayo yile Symposium, ke ngoko luya kuguqula isoyikiso esibonakalayo kwezoqoqosho, libe lithuba loqoqosho lwexesha elide.
Iqonga elitsha leDijithali kuKhuphiswano lukaMiss Universe
I-Delta Air Lines: Ubhukisho olutsha lwamazwe ngamazwe luqhubela phambili nge-450...
I-US iya kunyanzelisa isigunyaziso sogonyo lwe-COVID-19 kubucala...
Uhlaselo lobugrogrisi lwenzeka eUganda
Ukungena kwefowuni kuyabuya kwiinqwelomoya zaseLufthansa